Qaboojiyayaasha khamri kafiican | Ragga Stylish
Noocyada kala duwan ee qaboojiyeyaasha qolka khamriga
Kahor intaadan dooran a hawo qaboojiye hawo qaboojiye ah Gaar ahaan, way ku habboon tahay in lagu nuuxnuuxsado go'doominta iyo sifooyinka mugga. Si looga fogaado nooc kasta oo lama filaan ah oo xun, waxaa la doorbidaa in loo isticmaalo adeeg xirfad leh adiga rakibaadda.
Marka ugu horeysa, waxaa jira qaboojiyaha monobloc Sida magaceeda ka muuqata, waa aalad ka kooban hal baloog ama matoor. Qalabkani waa fududahay in la isticmaalo sidoo kale waa mid aad wax ku ool u ah makhaayadaha yaryar ee khamriga. Markaas waxaa jira qaboojiye maqaasiinka hawo qaboojiyaha ka Kala badh nidaamka.
Waa nooc kale qalab oo ka kooban saddex qaybood, oo ay ugu muhiimsani yihiin shaki la’aan uumi bixiyaha, kaas oo ku xidhan koox isku uruursata iyada oo loo marayo isku xirnaan kala duwan qaboojiyeyaasha.
Nidaamka qawaaniinta in lagu daro ogolaanayaa, ma aha oo kaliya in la xakameeyo heerkulka maqaasiinka khamriga, laakiin sidoo kale heerka ay Hygrometric. Waxa kale oo jira suurtagalnimada in lagu rakibo moodeel darbiga ku dhejisan. Qalabka noocan ah wuxuu si fiican ugu dhex jiraa qurxinta waxayna siisaa caqli badan.
Waxa kale oo suurtogal ah in la isticmaalo a qoyaan si loo habeeyo jawiga maqaasiinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » Noocyada kala duwan ee qaboojiyeyaasha qolka khamriga
8 udgoon gaar ah guga